စီးကရက်ထက် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အိမ်တွင်းလူသတ်သမား by popolay.com
12 Jul 2018 7,183 Views
အိမ်မှာနေ့တိုင်း အသုံးပြုနေကြရတဲ့ အိမ်အသုံးအဆောင်တွေထဲမှာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေကြမို့ မထူးဆန်းဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် တစ်ကယ်ကို အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဆိပ်တွေက အိမ်တိုင်းနီးပါးရဲ့ အိမ်ဦးခန်းတွေမှာ ပျံ့လွင့်နေပါတယ်။
အိမ်တွေမှာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှုအရဖြစ်စေ၊ အိမ်ခန်းလေး ခမ်းနားအောင် အနံ့လေးရှိနေစေဖို့ဖြစ်စေ မွှေးရနံ့ပါတဲ့ ဆီမီးတိုင်တွေ ထွန်းညှိထားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါတွေဟာ တစ်ကယ်တော့ မိသားစုရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ အန္တရာယ် အဆိပ်ငွေ့တွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သင်သတိထားမိပါရဲ့လား..?
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖယောင်းတိုင်အများစုဟာ ရေနံဆီပါဝင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖယောင်းတိုင် ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံအများစုဟာ ဈေးသက်သာပြီး ရေနံကနေ ချက်လုပ်ရရှိတဲ့ ဖယောင်းသားတွေကိုပဲ သုံးတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုဖယောင်းသား အငွေ့တွေကို အမြဲရှုရှိုက်မိသူဟာ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူနဲ့မခြားပါဘူး။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ။ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ ကင်ဆာရောဂါထိပါ ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။
ရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူဟာ ဖယောင်းတိုင်က ရနံ့လေး ရလိုက်တာနဲ့ သူ့ရဲ့ ရောဂါချက်ခြင်း ထဖောက်လာတော့တာပါပဲ၊ ဒါဟာဖ​ယောင်းတိုင်တွေမှာ ရေနံဆီပါဝင်မှု ဘယ်လောက်တောင်များနေလဲဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။
ဖယောင်းတိုင်ဟာ မီးလောင်ကျွမ်းပြီး အရည်ပျော်လာတာနဲ့အမျှ ထွက်လာတဲ့ အငွေ့က ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကို စက်နှိုးထားလို့ ထွက်လာတဲ့ အငွေနဲ့ သဘောတရားခြင်း အတူတူပါပဲ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် လေထုထဲမှာ ကာဆီနိုဂျင် ဆိုတဲ့ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေ ပြည့်လာပါတယ်။ ဒါဟာ သင်နဲ့ မိသားစုအတွက် ကျန်းမာရေးအရ အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပြဿနာတွေအပြင် အဆုပ်ကင်ဆာပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လတ်တလော သုတေသနပြုထားချက်အရ သင်းရနံ့မွှေးတဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေက ထွက်လာတဲ့ အငွေ့ဟာ ထင်ထားတာထက်ကို ပိုပြီးဆိုးရွားနေပါတယ်။ အသက်ရှုပြသနာနဲ့ ကင်ဆာရောဂါသာမက ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းတို့မှာ အဖုအကျိတ်အလုံး တည်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အင်စတီကျု့က ရေနံကနေထုပ်လုပ်ထားတဲ့ မွှေးရနံ့ပါတဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ သတိထားပြီး သုံးစွဲကြဖို့ သတိပေးညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ဈေးသက်သာတဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေ၊ မွှေးရနံ့သင်းပျံ့တဲ့ ဆီမီးတိုင်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကျဉ်သုံးစွဲပါ။
ဒီလိုဆိုရင် ဘုရားဆီမီး မပူဇော်ရတော့ဘူးလား..? အိပ်ခန်းလေး မွှေးသန့်နေအောင် မထွန်းရတော့ဘူးလာ..? လို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
အဲဒီဖယောင်းတိုင်တွေအစား “Soy candle” ပဲပိစပ်ကနေ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ “Beeswax candle” လို့ခေါ်တဲ့ ပျားကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပျားဖယောင်းတိုင်တို့ကို အစားထိုးပြောင်းလဲ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ဖယောင်းတိုင် နှစ်မျိုးစလုံးဟာ သဘာဝစစ်စစ် အော်ဂန်းနစ်ကနေ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ ရေနံဆီဖယောင်းတိုင်ထက်လည်း ပိုပြီးအထွန်းခံသလို သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့ကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။ ပျားဖယောင်းတိုင်ဟာ သာမန်ဖယောင်းတိုင်ထက် ၅ ဆပိုပြီး တာရှည်အထွန်းခံသလို ရနံ့ကြောင့်လည်း ရင်ကြပ်တာ၊ အသက်ရှုကြပ်တာ စတဲ့ ပြဿနာတွေ မရှိပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးကျန်းမာဖို့ သင့်ရဲ့ အိမ်ဦးခန်းက အဆိပ်သင့်နေတဲ့ ဖယောင်းတိုင်တွေကို အမြန်ဆုံး အစားထိုးလဲသုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်..။